30 xayeysiis bannaanka bilaash ah iyo mupi ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Khayraadka
Marka aan sameyneyno mashruuc naqshadeyn ah (ama naqshadeynta xayeysiinta ama naqshadeynta websaydhka) soo bandhigida iyo muuqaalka ayaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ka mid ah. Nasiib wanaagse, maanta waxaan haysannaa tiro badan oo kheyraad ah oo noo fududeynaya inaan soo bandhigno wax soo saar, fikrad ama fikrad.
Kheyraadkaas waxaa lagu magacaabaa Mockups iyo waxa caadiga ah waa in lagu heli karo qaab psd ah isla markaana ay diyaar u yihiin inay adeegsadaan walxaha caqliga badan. Hoos waxaad ka arki kartaa liistada 18 mockups xayeysiinta banaanka ah ee qaab psd ah.
1 Bilaabista Joojinta Basaska Bilaashka ah
2 Lacag La'aanta Iskuulada PSD
3 Free Banner Streamer Mockup PSD
4 Lacag La'aanta Calaamaynta Gawaarida PSD
5 Lacag La'aanta Basaska London Free PSD
6 Xayeysiinta Bannaanka Bilaashka ah ee PSD Jees-Up
7 MockUp PSD Calaamadeynta Basaska Bilaashka ah
8 Bilaash Van Mockup Psd
9 Saldhigga Baska Xayeysiinta Bilaashka ah ee PSD
10 Qurxinta Bilaashka ah ee Bilaashka Ah ee PSD
11 Dibadda Pock Mockup template PSD
12 Boodhadh yar oo lagu jeesjeeso PSD
13 Boostada Xayeysiinta Gudaha
14 Jadwalka Xayeysiinta Gudaha 02
15 Joojinta Baska
16 Joojinta Baska Boodhka 02
17 10 Boorarka Magaalada
18 Xayeysiiska waddada
19 Xayeysiinta daaqada dukaanka
20 Saxeexa gidaarka
21 Saxeexa gidaarka sudhan 05
22 Saxeexa gidaarka sudhan 03
23 Saxeexa gidaarka sudhan 02
24 5 boodhadh waaweyn oo baararka lagu cabo
25 Saxeexa gidaarka sudhan 010
26 Calaamadaha Windows
28 Goobaha Cagaaran Alps
29 Baarka Quay
Bilaabista Joojinta Basaska Bilaashka ah
Xayeysiinta banaanka loogu talagalay qaabee fikrad soo jiidasho leh iyadoo shimbirkaas duulaya.
Lacag La'aanta Iskuulada PSD
Isku mid, laakiin leh hal cabbir guud ahaan noocyada kale ee xayeysiinta sida sawirka ka muuqata si fiican.
Free Banner Streamer Mockup PSD
Iyada oo font aad u qaas ah in aqoonsiga astaanta wixii noqon kara dhacdooyin.
Lacag La'aanta Calaamaynta Gawaarida PSD
Ku dhiirrigeliyay cilmiga deegaanka iyo midabka ugu wanaagsan ee la xiriira dareenkaas, jees jees kaamil ah sababo kala duwan awgood.
Lacag La'aanta Basaska London Free PSD
Wixii cabirro waaweyn ah tan jees jees fiican baska.
Xayeysiinta Bannaanka Bilaashka ah ee PSD Jees-Up
Fudud oo leh font tilmaamaysa go'aanka iyo qaar xariiqyo sifo qeexan loo qeexay.
MockUp PSD Calaamadeynta Basaska Bilaashka ah
Si qumman caymis doonaya inuu calaamadeeyo fikradda kalsoonida shirkadda.
Bilaash Van Mockup Psd
Jees jees kale oo loogu talagalay a gaari leh nashqad cas iyo nooc toos ah.
Saldhigga Baska Xayeysiinta Bilaashka ah ee PSD
Mid ahaan joogsiga baska iyada oo aan faan badan taasina waxay toos ugu socotaa barta.
Qurxinta Bilaashka ah ee Bilaashka Ah ee PSD
Un Naqshadeynta qalabka guryaha.
Dibadda Pock Mockup template PSD
Ujeeddada liinta ee ciddiyaha xariiqyo jaantus ah oo qaabeeya sawirka xoogaa aan la taaban karin.
Boodhadh yar oo lagu jeesjeeso PSD
In kale baaxad ballaadhan oo isku ujeeddo ah midab liin dhanaan ah
Boostada Xayeysiinta Gudaha
Wixii boodhadhka caadiga ah ee waxaan ka heli karnaa suuq weyn oo leh font aad u soo jiidasho badan.
Jadwalka Xayeysiinta Gudaha 02
In ka badan sawirka garaafka ee hamburger oo leh naqshad aad u gaar ah.
Si sababtu waa dhar iyo mood, Jees jeeskaan joogsiga baska.
Joojinta Baska Boodhka 02
Kuwa kale version hore.
10 Boorarka Magaalada
Toban boodhadh magaalo oo cabbirkoodu kala duwan yahay iyadoo ujeedku ku jiro midab cagaaran.
Un jeesjees kaamil ah bandhigyada farshaxanka.
Xayeysiinta daaqada dukaanka
Hadaad fureyso a bakhaar khaas ah oo taabasho fiican leh, kani waa adiga.
Kuwa kale boodhadh aad u fiican naqshadeynta.
Saxeexa gidaarka sudhan 05
Khadadka taagan ee astaan ​​u noqon kara ku habboon dukaan kasta oo ka bilaabmaya xarafka "M".
Saxeexa gidaarka sudhan 03
Bakhaar ama nooc kasta oo ka mid ah alaabada gacanta lagu sameeyo.
Saxeexa gidaarka sudhan 02
Mid kale oo leh hadaf la mid ah kii hore, laakiin badan oo la xiriira quraacda iyo cuntooyinka fudud.
5 boodhadh waaweyn oo baararka lagu cabo
Wixii a baarka walaxda iyo in uu leeyahay "in", in ka badan kaamil ah. Mid kasta oo ka mid ah shanta waa shaqo wanaag.
Saxeexa gidaarka sudhan 010
Biir iyo cabitaan wanaagsan oo loogu talagalay boosta xoogaa hipster iyo guridda.
Una Isku-xidhka casriga ee casriga ah ayaa ku samayn kara luul calaamadaas banaanka ah.
Wixii a dhacdo taas oo naqshadeynta ay tahay udub dhexaadka, ama middaas la rinjiyeeyay.
Goobaha Cagaaran Alps
Nooc kasta oo ka mid ah aasaasid la xiriirta buurta.
Naqshad gaar u ah maxaa warqad doon ah.
Mupi xallinta sare ee mupi ee qaabka PSD ayaa kuu oggolaaneysa adiga ayaa kuu oggolaan doonta inaad la qabsato lakabyada iyo walxaha caqliga leh ee aad jeceshahay inaad u qaabeyso. Qaaska u ah mupis-ka iyo saxafiyiinta laga yaabo inay ku yaalliin waddada ama xarumaha laga adeegto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Mupi Mockup iyo xayeysiinta banaanka lagu xayeysiinayo
Sidee loo helaa tan leh GIMP ama Photoshop?